ROSE OF SHARON ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း
Posted by chodesigner at 6:18 AM No comments:
Hat Fashion ( 1)
နိုင်ငံတကာက ထူးဆန်းတဲ့ ဦးထုပ်ဖက်ရှင် လေးတွေကို ဆက်လက်ပြီးတင်ပြသွားပါမယ်..ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ ဆိုတာ က ရှိတာနဲ့ တီထွင်ပြီး ချုပ်လုပ်ဒီဇိုင်းဖော်နိုင် ရမယ် မဟုတ်လား..ဒါလေးကတော့ အသားတွေ ၀က်အူချောင်းတွေ နဲ့ တီထွင်ပြီး လုပ်ထားတဲ့ ဦးထုပ်လေးတွေပေါ့နော်.....စမ်းကြည်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့....ဈေးက ပြန်လာလို့ အသားတွေ ၀ယ်လာတဲ့နေ့ ဆိုစမ်းပြီး......ဓါတ်ပုံလေးပါရိုက်ပြီးပို့ပေးလို့ ရပါတယ်....
Posted by chodesigner at 12:51 AM No comments:
မြတ်စွာဘုရားက အလှအပဆိုတာ အရေပြားတထောက်စာလို့ဆိုပေမဲ့ လဲ ပုထုဇဉ် လူသားများကတော့ ဒီ အလှ အပ အတွက် ဖြစ်နေကြတာလေးကို……အောက်ပါ သတင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်…သူငယ်ချင်းတို့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်..
တရုပ်ပြည် ရှန်ဟိုင်းမြို့ ရှိ တရုပ်အမျိုးသမီးငယ်လေးတစ်ဦးသည်၊ သူမ၏ ချစ်သူက သူမအား Jessica Alba နှင့် တူစေရန် ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုကို ငြင်းဆိုခဲ့သည့် အတွက် လမ်းခွဲ ခဲ့သဖြင့် သူမ၏ ချစ်သူကို ပြန်လည် လက်ခံလာစေရန် ပလပ်စတစ် ဆာဂျရီ လုပ်ရန် စီစဉ်နေပြီ ဟု AHN သတင်းတစ်ပုဒ် အရသိရသည်။
အသက် ၂၁ နှစ် ရှိသူ ရှောင်ချင် ဟု ခေါ်သည့် အဆိုပါ အမျိုး သမီးငယ် မှ ၄င်းကို ရှန် ဟိုင်း ရှိ ခွဲ စိတ်ဆရာ ၀န် တဦး မှ အခကြေးငွေ ပေးစရာ မလိုပဲ မျက်နှာခွဲစိတ်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဟု ပြောပါသည်။
Shang Hai Time Plastic Surgery Hospital ဆေးရုံမှ ၄င်းခွဲစိတ်ဆရာဝန် Liu Qi က မျက်ခုံးကိုမြင့်တင်ခြင်း၊ မျက်ခွံကို ပုံစံပြုပြင်ခြင်း၊ နှာခေါင်းကိုပြုပြင်ခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်သွားရန်လိုအပ်ပြီး။ ခွဲစိတ်မှု အားလုံးပြီးသွားပါက မျက်နှာ အသစ် ဖြစ်သွားမည် ဟုဆိုပါသည်။
Posted by chodesigner at 9:20 PM No comments:
ထူးဆန်းလှပတဲ့ စာအုပ်စင် ဒီဇိုင်းလေးတွေ
ဖက်ရှင်နဲ့ ဒီဇိုင်းဆိုတာ လူမှု ပတ်ဝန်းကျင် မှာ အမြဲထိတွေ့နေရတာမို့....လှတဲ့ .....ဖန်တီးမှု စွမ်းအားကောင်းတဲ့ အိုင်ဒီယာ ရှိတဲ့ ဒီဇိုင်းလေးတွေကို မျှဝေချင်လို့ ဒီ post လေးကို တင်ဖြစ်သွားတာပါ...နောက်လဲ အ၀တ်အစားဒီဇိုင်းမှ မဟုတ်ပဲ......တခြားဒီဇိုင်းနဲ့ ပါတ်သက်တာလေးတွေကို ဆက်လက်မျှဝေသွားမယ်နော်..
ဝေဖန်အကြံပြု ဆွေးနွေးပေးကြပါဦးလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ.....
Posted by chodesigner at 9:26 PM No comments:
2010 ရဲ့ Women Fashion Trend ကတော့ ဒူးထိဒါမှ မဟုတ်ပေါင်ထိရှည်တဲ့ ခြေအိတ်များကိုဝတ်ဆင်ခြင်းလို့ဆိုပါတယ်...ဘယ်လိုလူတွေက ၀တ်ဆင်ကြလဲ ဘယ်ရှိုးတွေမှာ ၀တ်ခဲ့ကြလဲ ဆိုတာတော့ အောက် ကလင့်လေးမှာ ကြည့်ရင် ရပါတယ်....တွဲဖက်မ၀တ်တတ်ရင် တော့ ၁၉၇၀ခုနှစ်တွေက ကျောင်းသူလေးတွေရဲ့ စတိုင်လ်မျိုးလဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်..ဖက်ရှင်ရေစီးဆိုတာကတော့ အမြဲတမ်းပြန်ကျော့နေတဲ့ သဘောတော့ရှိပါတယိ..ကဲ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်...
• ခြေအိတ်အရှည်လေးတွေကို ကိုယ်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် တော့ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ အောက်ပါ ၃ မျိုးထဲက တခုခုကို ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်….
• Over the Knee Sock
• Thigh High Sock တို့မှ
မိမိနဲ့လိုက်ဖက်ရာကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်...၀ယ်ပြီးမှ မ၀တ်ဖြစ်ပဲ သိမ်းထားရင် လဲနှမြောစရာဖြစ်နေရမယ်မဟုတ်လား။
တချို့ကတော့ ပုံမှာ ပြထားသီလို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်ရဲ ရဲ အလှဆင်ထားတဲ့ ခြေအိတ်မျိုးကိုမှ နှစ်သက်တဲ့လူလဲရှိမှာပါ။ကဲ ၂၀၁၀ မှာ ခြေအိတ်ရှည်လေးတွေနဲ့ အလှဆင်လိုက်ကြရအောင်နော်....
Posted by chodesigner at 5:50 PM No comments:
ဒီဖိနပ်လေးတွေကတော့ MELFLEX plastic လို့ခေါ်တဲ့ အလွန်ပျော့ပြောင်းတဲ့ PVC နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီး၊ recycle ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်တွှဲ့ plastic တမျိုးလဲဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူဆိုရင်တော့ ဒါမှ မဟုတ် မြေကြီးထဲမှာ မဆွေးမြေ့ မပျက်စီးနိုင်တဲ့ ပလပ်စတစ် များကို မတွေ့ချင်တဲ့ သူဆိုရင် ဒီ Melissa ဖိနပ်လေးတွေကို ၀ယ်ယူပြီးဖက်ရှင် လှလှ လေးဝတ်ဆင်ကြရအောင်နော်.....
Posted by chodesigner at 5:39 PM No comments:
၂၀၀၉ Chatrium wedding Show
အဲဒီတုံးက ကမန်းကတန်းလုပ်လိုက်ရတယ်..........၀တ်စုံအားလုံးကို အရောင်နှစ်ရောင်ကို အဓိကထားပြီးချုပ်မယ်ဆိုပီး....ဒါပေမဲ့ တကယ်လုပ်တော့သိပ်အဆင်မပြေဖူးဖြစ်သွားတယ်..........
Posted by chodesigner at 6:47 AM No comments:
Labels: ၂၀၀၉ Chatrium wedding Show ကပုံလေးတွေ
မျှဝေချင်သော ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းနှင့်ပါတ်သက်သမျှ
I am young designer, who try to be an international designer. I want to show Myanmar designer are very clever and we have our own traditional style.